Ganacsade Axmed Cabdi Timir oo lagu dhaawacay Magaalada Laascaanood
Laascaanood:-Waxaa maanta duhurkii lagu dhaawacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ganacsade Axmed Cabdi Timir oo si weyn looga yaqaan magaalada Laascaanood waxaana dhaawaca u geystay laba dhalinyaro oo ilaa haatan heybtooda aan la aqoon .
Dad goobjoogayaal ah oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool ayaa waxay sheegeen in ganacsade Axmed Cabdi Timir ay toogteen laba dhalinyaro ah xili uu marayey bartamaha magaalada Laascaanood waxayna xabadu ka haleeshay laabta iyo madaxa .
Weerarkan lagu dhaawacay ganacsade Axmed Cabdi Timir ayaa u muuqda weerar qorsheysan iyada oo xalay ay weerareen kooxo hubeysan guriga uu ka degan yahay magaalada Laascaanood ganacsade Axmed Cabdi Timir iyaga oo weerarka ay gabar ku dhaawacantay.
Wararka ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in ciidanka amaanka ay ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan ragii dhaawacay ganacsade Axmed Cabdi Timir waxaana wararka qaar ay sheegayaan in weerarku uu la xiriiro aano qabiil.
One comment on “Ganacsade Axmed Cabdi Timir oo lagu dhaawacay Magaalada Laascaanood”
deeqa on January 7, 2013 at 8:28 am said:
Illahoow soomalida ka dawe nin aan waxba gaysan u dillaya qofkale
226,864 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress